Owokholo ufuna ukusungula ikwaya | News24
Owokholo ufuna ukusungula ikwaya
Umculi wokholo uMbongeni Kheswa.ISITHOMBE: sithunyelwe
UFISA ukugcina esekhiphe icwecwe lakhe aphinde abe nekwaya lomculo wokholo laseMgungundlovu owaseHenley Dam.
UMbongeni Kheswa (26) waqala ukucula esasesikoleni iSero Secondary kanti kumanje ungomunye wabaculu abacula noThina Zungu odume kakhulu endimeni yomculo wokholo.
Engxoxweni ekhethekile ne-Echo uKheswa uthe nakuba kumjabulisa ukusebenzisana nabaculi abakhulu kule ndima, kuyisifiso sakhe ukuthi ngelinye ilanga naye agcine esekwazi ukucula yedwa aphinde alekelele abanye abaculi abancane abasafufusa eMgungundlovu nasendaweni eziwakhele.
“Ngiyazi ukuthi likhona ithalente endaweni yethu inkinga ukuthi nje lidinga ukuvundululwa abantu banikezwe ithuba.
Ngiyazi ukuthi kukhona abanye abaculi abasafufusa engingathada ukubasiza ngibalekelele ngokuthi ngokusungula izinkomfa nalapho kuzodingidwa khona kuphinde kufundiswane khona ngale ndima yomculo ngoba ayikho lula.
Ukuba umculi ikakhulukazi wokholo akusikona nje kuphela ukuthi kumele ungene esiteji bese uyacula bese kuphele kanjalo kodwa kuhamba nawe nangendlela oziphatha ngayo, kanye nokubekezela ngoba lendima ayikho lula,” kubeka yena.
Uthe ngesikhathi ekhula ubekhula ngawo umculo futhi ewuthanda njengoba nasesikoleni wayengumphathi wekwaya. Uthe ngesikhathi enza ibanga lika-Grade 9 waqala wakhipha i-album yakhe nge-cassette eyayisihloko sithi Vuma Vuma.
“Ayizange ikuthole ukuduma kakhulu yona kodwa loko ikona okungikhuthazayo nokunginikeza amandla nethemba vukuthi ayikho into engangivimba ukuba ngiphinde ngikhiphe enye i-album manje kwazise sengikhule kakhulu kwezomculo.
Into engiyithandayo kakhulu nje ukuthi njengoba ngenza lo mculo akusikona ukuthi ngiwenza ngoba naku uNkulunkulu angipha izwi lokuthi ngikwazi ukucula kodwa ingoba into ekumina ngaphakathi uNkulunkulu uphila kumina ngaphakathi lena ngenye yezindlela zokumdumisa.
“Kungangijabulisa kakhulu uma nje songathola ukwesekwa ezindaweni esiphuma kuzona ikakhulukazi uma ngabe siya ezindweni zangaphandle kanye nasemazweni angaphandle ngoba ekugcineni sisuke singazimele thina kuphela kodwa simele nezindawo lapho sisuka khona. Kuningi esingakwazi ukukwenza nesingaphumelela kukona uma singenza kanjalo.”
uKheswa usesebenzisane nabaculi abaningi okubalwa kubona uSfiso Ncwane ongasekho emhlabeni kei-album yakhe ‘Kulungile baba’, Kholeka, Sipho Ngwenya engomeni yakhe thi ‘Jesu ufika ekuseni’ kanti useke waba ngabanye babaculi ababecula ngomcimbi wezindondo ama-Crown Gospel Awards ngonyaka wezi-2016.
Ngaphandle komculo wokholo uKheswa uthanda ukucula umculo we-jazz kodwa akagxilile kakhulu kuwona.